Indlela Kuhlangana (Isitshayina) Guys kwi-China Umbhali. Traveler. Iti Drinker
Jocelyn phezu e Ukuthetha of China kutshanje uphendule umbuzo kwi -yeminyaka ubudala omnye western umfazi bemangalisiwe njani ukuba ahlangane Isitshayina guys kwi-i-shanghai. Okanye, ngenye indlela, Jocelyn kodwa kuza t kakuhle impendulo ngayo herself njengoko yena akusebenzi t ngokuqinisekileyo. Endaweni yena wabuza a Isitshayina i-shanghai guy (ngubani watshata a foreigner) njani ukwenza oko. Impendulo yakhe yaba kulungile, ukuba tad ngokubanzi, kwaye ndaqaphela ukuba kukho into. le into mna ngokwenene ukwazi into malunga. Mna ve zahlangana ezininzi Isitshayina guys kwezinyanga ezimbalwa iminyaka kwaye ngoku yenze kunye wawuphungula. Wonke umntu thinks kukho solo ezininzi guys kwi-China kwaye ngokuqinisekileyo intlanganiso a guy kufuneka ube lula. Kodwa ngokwenene, ayo s hayi kwaye iqalisa kancinci ka senzo nokwazi-njani. Kancinci isiqalo: mna weza China watshata, kwaye ngokuqinisekileyo zange wayecinga ukuba ubudlelwane ezinye guys yaba malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza. Mna ke zange nkqu omnye kuba mthubi fever. Kodwa ke weza wokuqhawula umtshato kwaye ndafumanisa ngokwam owodwa kwaye, emva zimbalwa zidlulileyo, ukulungele ukufumana emva kwi-horse. Kwaye mna ve kokuba iselwa a bit of impumelelo, dating guys ranging kwi – nazo zonke iintlobo ezininzi ezonakeleyo imisebenzi. Le nto andikho ikhangela a ezinzima budlelwane njengoko ndiya deserve kancinci lekhefu ukuze ibe yi-ngokwam mna uphumelele khange kube kwesi sixeko kuba kakhulu ixesha elide ngoko ifumana abakwicandelo into enzulu isn t ekunene, kunjalo ngoku. Kanjalo, andikho anomdla dating foreigners okanye nkqu dating Isitshayina guys ukuba bathethe isingesi. Mna nani ndiza kwi-China, ngoko ke kufuneka kwamkela abahlala apha ngokupheleleyo. Andinalo t kunzima ukusebenza ngokupheleleyo ruled ngayo ngaphandle, kodwa andifuni t jonga kulo. Kanjalo, xa ndizama iselwa ephumayo ndinguye uhlobo esiqhelekileyo kwi-evakalayo ukuba mna uphumelele khange enze lokuqala shenxisa. Mna ulinde guys ukunxibelelana mna kuqala kwaye bonisa inzala yabo. Ukuba thina ve sele chatting kuba ndikhe ndibe kuthi kukho into malunga ethabatha ke kancinci ngaphezulu, kodwa mna uphumelele ukuba ngokwenene kuba kuqala ukuba asazanga nabo okanye nantoni na. Ngoko ke, ngaphandle ngakumbi ado, apha bam abancinane isikhokelo kwi njani ukuba ahlangane Isitshayina guys kwi-China. (Mom, dad ungafuna ukumisa ufunda apha.) Iinkwenkwezi Clubs Basically eyona imbi le ndawo ukuya kuhlangana abantu. Nkqu ukuba ukhe ubene nje ikhangela a hook-phezulu ngu engalunganga ndawo. Uyabona ladies, wemiceli-ingxaki kule ntlanganiso Isitshayina guys yakho foreignness. Kukho ezininzi stereotypes malunga yintoni langaphandle umfazi ifuna kuquka, kuphela otyebileyo guys, kuphela langaphandle guys, kuphela guys ukuba unako ukuthetha fluent isingesi, njalo-njalo. Ngoko ke pretty kakhulu wonke guy iya kuba kakhulu ukuba neentloni ukuba indlela kuwe. Nkqu ukuba bathe basela nje kancinci okungamanzi isibindi kwaye ucele ukwazi ukungena kwabo ngomhla wabo itheyibhile, ukuze apho kuya mhlawumbi yeka. Babe nkqu kuthi iimboniselo njenge, kufuneka kwakhona ngoko ke beautiful kwaye yintoni na-na, ngoko ke ngesiquphe, shiya. Kuphela guys ukuba abe ngokuzingisileyo phambili kwaye ikholisa uhlobo douchey otyebileyo okkt abo bacinga ukuba banganako kuthenga wena okanye nantoni na. Hayi uhlobo ndithanda. Umzekelo, omnye xesha ndandisele e a club dancing wam ass ngaphandle kwaye ibambe abanye guys lingqina. Esilandelayo ezimbalwa songs thina yangqungqa kunye ngamnye enye, silithi ngamnye nezinye ke izandla, laughing kwaye ekubeni fun. Emva ngelixa yena motioned kuthi ukuba thatha isithuba kwaye sahamba phezu olunye uluhlu lophinda-phindo kufutshane bahlobo bam. Ndabona omnye yam (kumazwe angaphandle) guy abahlobo kissing a Isitshayina kubekho inkqubela. Le guy ndandikunye ikhangeleka e nabo kwaye athi, Thina.
Ngoko uqokele, Kodwa ndiza kanjalo kancinci onomona. Kutheni ngakumbi epheleleyo okanye ingaba wena ngakumbi onomona? Ndicela ukuzama ukuqonda ezi kakhulu mixed imiyalezo waba zinika kum. Ngaphezulu epheleleyo, wathi. Noko wanika mna a hug njengoko washiya, ngaphezu uninzi guys uza kukwenza. Umhlobo ka-Umhlobo ndicinga ukuba osikhangelayo elide budlelwane le indlela khona. Zibalisa yakho Isitshayina abahlobo (ingakumbi yakho guy abahlobo) ukuba ukhe ubene ikhangela umntu kwaye baya kusenokwenzeka ukuba uyazi, njenge, guys ngaphandle phezulu kwabo intloko. Ubuqu, ndikuvayo kancinci okungekuko malunga le indlela. Ndinezinto ezininzi indoda Isitshayina abahlobo kwaye ukuba baya zama ukucwangcisa phezulu kum, mna bazive kancinci ngoluhlobo ngabo pimping kum ngaphandle okanye into ethile. Kwaye kwenzeka ntoni ukuba kum kwaye bahlobo bam, umhlobo get kunye. Yintoni umhlobo wam esithi ukuba guy? Yintoni guys esithi yam umhlobo malunga nam? Oko ikhangeleka nje kancinci okungekuko kum kwaye mna, nento yokuba ngenye kuhlangana guys yi-ngokwam. Ukuba ke wathi mna baye bahlangana ezimbalwa guys ngokusekelwe bahlobo bam’ iingcebiso oku ehlotyeni. Nto ihamba kakuhle, kodwa baye baguqukele phandle kuba mnandi ngokwenene njengoko bahlobo bam wayesazi uhlobo guy ukuba ndingathanda. Apps Lo ngunyana wam imfihlo kwaye indlela ndiya kuhlangana ka-guys. WeChat yi best usetyenziso hayi kuphela chatting, kodwa kuba intlanganiso abantu. Kukho jonga jikelele osemqoka, apho unako isijamani kwaye ikubonisa bonke abantu kwisithuba km-sangqa abo bamele kanjalo usebenzisa jonga jikelele. Unga coca ulwelo ngayo ukuba nje kubonisa guys, kwaye uyakwazi ukubona indlela vala ngabo kwi imitha umlinganiselo. (Nangona kubalulekile akusoloko oluchanekileyo. Umhlobo wam owayeneminyaka ehleli ngasekunene kuwo ukusuka kum waba ezidweliswe kwi meters kude.) Njenge ndathi, ndiya ulinde guys ukunxibelelana kum. Ngomhla we-WeChat banako kukuthumela umyalezo, kwaye yayo s phezulu kuwe lokugqiba ukuba uza yamkela nabo okanye hayi. Andizange incoko kunye nabani na ngaphandle a real inkangeleko umboniso (ngoko ke, abaninzi guys sebenzisa pics ka-iimoto okanye izinja okanye ezinye stupid zinto) kwaye mna idla musa t siphendule abantu ukuba ubhale kum ngesingesi. Isizathu sokuba oku eyona ndlela kuhlangana guys ufumana i-app inika shyer guys isibindi. Baya musa t kuba ukuthetha nawe ubuso ubuso kwaye ukuba uvula kubo phantsi okanye lahla kwabo, ayo s hayi ke ezinzima. Baye kanjalo unako uvavanyo kuwe ngaphandle ukubona ukuba athethe Isitshayina. Mna isetyenziswa kuphela lo msebenzi kanye ngexesha lam esikolweni (ngenxa jikelele apha kubalulekile ikakhulu abafundi andikho ethanda umhla a student) kwaye ndandidibana bam abancinane™. Mna idla ukuyisebenzisa kwi-i-shanghai kwaye Hangzhou kunye ngenene iziphumo ezilungileyo. Kufuneka ibe tad phambili, njenge suggesting kuhlangana nawe, njengokuba abanye guys uza nje incoko kuba imihla kwaye imihla kwaye zange phakamisa umhla, kodwa yayo s lula kuba ngaphezulu outspoken xa usebenzisa i-app. Kodwa chatting kuba mhla okanye emibini yokuqala yiyo ngokwenene a into elungileyo njengoko kuya kokhula ukhula ngaphandle weirdos. Umzekelo (seriously, mom kwaye dad ukuba ufaka? ukufunda lento, yima ngoku), omnye xesha ndandisele kwi-i-shanghai chatting kunye a guy ukuba seemed kunzima ukusebenza ngokupheleleyo eqhelekileyo kwaye mnandi. Sasivuya chatting kwi kwaye ngaphandle imini yonke kunye nje uhlobo eqhelekileyo apho kwenu ukususela, yintoni ingaba unqwenela ukwenza, izinto. Izinto baba ke kulungile, silifumene ihamba kakuhle. Ngoko ke, jikelele pm lowo wandithumayo umfanekiso. Kwaba umfanekiso, um, kulungile, tissue.
A ezimanzi tissue
Ngoko wathumela ngakumbi pics, impazamo, kulungile, indlela tissue onayo ezimanzi. Ndandikunye iqelana ka-abahlobo, kwaye kunjalo yabonisa kwabo, kwaye thina ophele ngowama-phezulu ekubeni a hilarious ixesha elininzi kuyo. Kodwa kwakungekho ndlela ndaxelelwa ke ngonaphakade ahlangane naye emva koko. Oku kanjalo i-comment app ukusebenzisa xa ufaka abajikelezayo. Wena musa t nkqu kufuneka ukuba ufuna ukufumana umhla, abantu abaninzi bazimisele nje beka phantsi ngaphandle kwaye kubonisa zabo hometown. Ndaba ekhaya ephekiweyo nsnp, personal tours kwaye onayo ezininzi ulwazi malunga entsha iindawo ngenxa intlanganiso abantu kule app. Unako kanjalo nje sebenzisa olu setyenziso ukwenza abahlobo kunye kuhlangana abantu yakho neighborhood. Andinako kuthi ngokwaneleyo izinto ezilungileyo malunga le app. Kukho enye app ngokuba Momo, iguqulelwe kwi-Heee Stranger. Oku hook-phezulu app kwaye hayi akunjalo nto ukuba osikhangelayo a ezinzima budlelwane okanye nje abahlobo. Kodwa unako kuba mkhulu xa ufuna kwindawo entsha kwaye ufuna ukuya ngaphandle kwaye kuhlangana abantu kodwa musa t nokwazi nabani na kule ndawo. Nje kuba forewarned. Ukuba unayo le app kwi yefowuni yakho musa t flaunt kuyo. Layo s inye kwezo zinto ukuba wonke umntu uyayazi malunga kwaye ukuba Isitshayina abantu bayibone kwi yefowuni yakho, baya kugweba kuwe (wayecinga ukuba babe ngokuqinisekileyo, nokwazi malunga nayo kakhulu, kwaye mhlawumbi kuba oko, ayo s nje eyona awugcine efihlakeleyo). Njengathi WeChat kuya kubonisa abantu yakho ngqo kwindawo abo bamele kanjalo usebenzisa i-app. Uyakwazi uqhankqalazo phezulu incoko kwaye ilungelelanise intlanganiso. Kwaye kunjalo, ukuba niya kuhlangana abantu ngokusebenzisa i-app dlala ngayo ekhuselekileyo. Xa kufuneka badibane nabo okokuqala yenze ngexesha umhla kwi kawonke-wonke, njenge park, okanye inqwelo street okanye into ethile. Musa t baxelele apho uhlala khona okanye badibane nabo ku yehova. Nje dlala ngayo ikhuselekile kwaye yayo s zonke ezilungileyo. Mna ve zahlangana a. abantu nge-apps kwaye zange kanye worried malunga wam ukhuseleko okanye waba nayiphi na iingxaki. Kodwa ndiza kanjalo ebukekayo malunga xa apho ndiya kuhlangana nabo. I-intanethi Dating Le into andinalo t balingwe kanti (nangona ukuba kuni, bazalwana mhlekazi ukuba umfundi ufuna kum, ndibe nento yokuba kuba ethanda.) Kukho plenty ka-zephondo ukuba ingaba ngesingesi kwaye predominately Isitshayina, njenge Asian umhlobo finder kwaye ezimbalwa AMFW (Asian indoda langaphandle umfazi) websites ngokunjalo abanye kuphela kwi-China okkt njenge personals. Ndiyazi abanye abahlobo abathe kokuba impumelelo kunye nabo, kodwa mna ve zange kusetyenziswa nabo ngoko ke andifuni t andazi. Ngokuqinisekileyo, ikhangeleka ngathi elungileyo indlela nangona. Ngoko ke s icebiso lam. Kunjalo, ndiya kuba zahlangana ezimbalwa guys ubuso ubuso, njenge kwi-iti okanye iivenkile restaurants (Enye guy approached kum ngexesha rock xa wathi uxolo, wena remind kum wam langaphandle utitshala, ndandisele liechtenstein, ezilungileyo chola-phezulu kumgca umhlobo.) kodwa ukuba kwenzeka ntoni manqapha-nqapha, kwaye kubaluleke ngenene phezulu ukuya guy, ngoko ke awunokwazi ubalo kuyo. Ukuba ufuna ukuya kuhlangana guys kufuneka ibe brave kwaye uzimisele ubeke ngokwakho ngaphandle kukho kancinci. Kwaye khumbula, bamele mhlawumbi x ngakumbi nervous uthetha kuni, hayi kuphela kubekho inkqubela kodwa langaphandle kubekho inkqubela, ngoko ufuna uthetha kubo. Ndibathanda oku ngeposi. Le guy kuthunyelwa kuwe imifanekiso yakhe tissue literally made kum laugh ngaphandle nelikhwazayo. Mna kodwa kuza t nokwazi kwabakho site ngokuba AMFW. Olukhulu ngeposi njengoko rhoqo.
I-tissue guy sele kuba legendary wam isangqa ka-abahlobo ukuba kwakungekho busuku. Sibabiza kuye YOH, N ngu kuba napkin, kwaye J lele, impazamo. oko kwaba KWI-napkin. Waqhubeka ukubhala kum kuba kwiiveki ezimbalwa kodwa mna kodwa kuza t impendulo. Ndiyazi ukuba abenako ukucima kuye, kodwa waba nje ngoko ke funny waza wazisa okuninzi uvuyo kum kwaye bahlobo bam, mna ayikwazanga ukwenza oko
Ividiyo Dating China Ividiyo Dating Jikelele Ukuncokola nge-Ilizwe →